Olee Otú M Ga-esi Agwa Papa M na Mama M Gbasara Iwu Ndị Ha Nyere M? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ihe i kwesịrị imụta: Mụta otú ị ga-esi na-agwa ha okwu
Ọ bụrụ na gị na ha na-ekwurịta okwu
ọ ga-eme ka ha ghọta gị
ọ ga-emekwa ka ị ghọta ihe mere ha ekweghị eme ihe ị chọrọ.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ka papa gị na mama gị na-eme gị ka onye toro eto, i kwesịrị ịna-ekwu okwu ka onye toro eto. Olee otú ị ga-esi eme ya?
Mụta ijide onwe gị. I kwesịrị ịna-ejide onwe gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na papa gị na mama gị na-ekwurịta okwu nke ọma. Baịbụl kwuru, sị: “ Onye nzuzu adịghị ejide mmụọ ya ma ọlị, ma onye maara ihe na-ejideru ya n’isi. ”—Ilu 29:11.
Gịnị ka ihe a Baịbụl kwuru pụtara? Ha na-agwa gị okwu, atamula ntamu, agbachila ha nkịtị, ma ọ bụkwanụ were iwe kwachie ụzọ zọrọ kpim kpim pụwa. Àgwà dị otú a nwere ike ime ka ha nyekwuo gị iwu.
Gbalịa ghọta ihe papa gị na mama gị na-ekwu. Dị ka ihe atụ, ka e were ya na papa gị na mama gị achọghị ka ị gaa otu nnọkọ oriri na ọṅụṅụ. Kama ịrụwa ha ụka, i nwere ike ịjụ ha, sị:
“Ọ́ bụrụkwanụ na enyi m toro eto, bụ́ ezigbo mmadụ, esoro m?”
Ma eleghị anya, ha agaghị ekwe gị gaa. Ma ọ bụrụ na ị ghọta ihe mere ha ji jụ, ọ ga-aka adịrị gị mfe ịtụ aro ha ga-anabata.
Irubere papa gị na mama gị isi yiri ịkwụ ụlọ akụ̀ ụgwọ i ji ya. Ọ bụrụ na gị ana-erubere ha isi mgbe niile, ha ga na-atụkwasịkwu gị obi.
Mee ka papa gị na mama gị tụkwasị gị obi. Ka e were ya na mmadụ ji ụlọ akụ̀ ụgwọ. Ọ bụrụ na onye ahụ akwụọ ụgwọ o ji n’oge, ụlọ akụ̀ ahụ ga-atụkwasị ya obi. Ha nwedịrị ike ịgbazinyekwu ya ego n’oge ọzọ.
Otú ahụ ka ọ dị n’ezinụlọ. I kwesịrị ịsọpụrụ papa gị na mama gị. Ọ bụrụ na ị na-enupụrụ ha isi mgbe niile, ya ejula gị anya na ha agaghị atụkwasịcha gị obi. Ha nwekwara ike nyowe ihe ọ bụla i mere enyo.
Ma, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ga-eme ka ha tụkwasị gị obi ugbu a, ọbụnadị n’obere ihe, ha nwere ike ịtụkwasịkwu gị obi n’oge ọzọ.